Kedu ụgbọ ịnyịnya Trek a na-eme na USA? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ebee ka eji eme njem igwe eletriki - otu esi edozi
Ọ ga-adị mfe. Ọ ga-adị gị mma Ruo mgbe ị matara na ọ dịghị onye ọzọ na-akwọ ụgbọala na uwe elu-uwe na uwe khaki. Oge iji ejiji.
Ejikere nke oma. (bass heavy hip hop music) Malite iji okwu nrịanrịa dịka shred na gnar. Nọgidenụ na-akwọ ụgbọala, ka onwe gị gafere gị ugwu na ugwu.
Mgbe ahụ ghọta na ịchọrọ ọrụ nke abụọ iji kwado ihe riri gị ahụ. (wepu akpịrị ya) Echere m, agụụ? Zụta igwe kwụ otu ebe maka oge nke atọ. Nke a nwere ihe ndị ọzọ, ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ, oche oche ahụ na-arị elu na ala. - Mara mma. - Ọ bụghịzi naanị ịkwọ ụgbọala mgbọrọgwụ, izipu tụlee na ịmụ aghụghọ.
Mma. Ọ karịrị naanị ihe omume ntụrụndụ ugbu a. Ọ bụ ibi ndụ.
Otu ụbọchị, ịgwa ndị ọrụ ibe gị ihe niile draịva ị mere na etu ike si emebi. Ha anaghị ege ntị. Otu bụ.
Aha ya bụ Jess na ọ na-anya ụgbọ kwa. Ọ jụrụ ya, sị: 'younu chọrọ ịgba ọsọ oge ụfọdụ?' You na-asị 'Sanda ee!' Ọ na-apụta na Jess dị mma. Dị ka, rea lly mma.
Ọ na-azụ gị n'okporo ụzọ gbagoro na n'ụzọ niile. Nweghị ike ịgbada ihe ọ na-agba. Make na-eme ya mana ike gwụrụ gị.
Ọ na-eche 30 nkeji mana ọ na-ekwu na ọ bụ ọtụtụ ihe ọ funụ. O kwuru na ị kwesịrị ime ya ọzọ oge ụfọdụ. I kwenyere n’agbanyeghi na o gwepịara gị.
Mana nke ahụ anaghị enye gị nsogbu rue ụbọchị ahụ. (Whimper) (bass heavy hip hop music) Malite ịkwọ ụgbọala kwa ụbọchị mgbe ọrụ gachara. Chọta otu dị iche iche ma soro ndị ọkwọ ụgbọ ala ga-enyere gị aka ịmezi egwuregwu gị.
Ọ bụghị maka igwe kwụ otu ebe ị na - agba, ọ bụ maka ịnyịnya nke igwe kwụ otu ebe gị na - ebu gị. (Ikuku hisses) Ọfọn, ma eleghị anya ọ bụghị nke a. ('Enwetara m ihe ọ Juụ'ụ ahụ' site na Nrọ Junkies) ♪ Nne M Hụrụ n'Anya, ị ga-ahụ nke a d Gụsịrị akwụkwọ site na nnupụisi gaa mgbanwe ♪♪ Na mpaghara m ha hụrụ nke a n'anya ♪♪ M ga-agbaji ya ♪♪ Dị ka ịpị igwe ahụ ♪♪ Ascension ♪ Akụkụ ọ bụla na-elebara m anya ♪♪ Lee mkpụrụ obi m anya ♪♪ Lee obi m anya ♪♪ Lee olile anya m ♪♪ Nwee ụwa n'azụ m ♪♪ Ma m ka na-ebu ya ♪♪ Gwa ha na Chineke nwere aka m Agaghị m ahapụ ya ♪♪ III si n'akụkụ oke osimiri wee bịa ♪♪ Swam jiri ọkacha mma gị enweghị ike ịgọnahụ m ahọrọla m ♪♪ Ee ọ bụ Miggity mack ♪♪ ♪♪kingụ igwe okwu ♪♪ M echela na m ga-enyeghachi ya ♪♪
Ndi igwe eji eme njem Trek
O di nwute, enweghi ndi ozoTrek anyịnya igwenke ahụ zuru ezuemere na USA. Ha na-emepụta obere ọnụ ọgụgụ nkeanyịnya igwena ụlọ ọrụ ha dị na U.S. na Waterloo na Whitewater, Wisconsin (ihe dị ka 20,000anyịnya igwekwa afọ), mana nke ahụ kwụsịrị na Disemba 2017, dị ka isi iyi anyị nwere n'imeMee njemotu injinia.Ọnwa Ise 6, 2021
Ọ dị ịtụnanya dịka ị na-akwagide ya. Ọ bụrụ n ’ọ dị n’ ala larịị ka ị na - agbanye ya, ị chere na ọ bụ ihe m kpochiri ka ọ ga - eme? Kedu nke na-eme? Ọ dịka ị chefuru idebe nkwusiochi m? pụọ? Ma nke ahụ abụghị otú o si arụ ọrụ. (upbeat music) - Hey onye ọ bụla, M Mike Levy na-anabataghachi ọzọ Ubi Ule isiokwu.
Oge a anyị na-ekwu maka Giants Trance X. Ọ bụ 135 millimeter na-eme njem igwegharị igwe nwere ndụdụ 150 millimita. Giant na-ekwu, 'Ọ bụ naanị igwe kwụ otu ebe nwere ike ime ya niile.' Dị ka oge niile, anyị ga-ekwu maka nkwụsịtụ nke mbụ na njem njem nke Trance X nke 145.
Ọ bụ Maestro sọrọ njikọ nkwusioru ya na-achịkwa ya, ọ bụ sistemụ na-agbanwe agbanwe, aka abụọ na-agagharị na klọọkụ, ọ dịkwala kemgbe ogologo oge. Mana enwere ihe ohuru ebe a, geometry na-agbanwe agbanwe. Usoro mgbanwe ahụ dịkwa oke.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ igwe kwụ otu ebe ndị a na-enye naanị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ogo ma ọ bụ atọ ma ọ bụ anọ millimeters nke mgbatị mgbatị elu, Giant na-enye gị ogo 0.7 maka mgbanwe maka isi na akụkụ oche ma na-agbanwe mgbatị nkwado ala site na 10 millimeters. Giant na-ekwu na nkwusio abụọ nke njikọ Maestro na-emepụta ebe dị mkpa na ebe a ma na-enweghị onwe ya na braking na mgbatị, Holy Grail metric pivot Mount, n'ezie, dị ka ọtụtụ n'ime ụbọchị ndị a, na ugwu ujo dị ala na-arụ ọrụ abụọ, ka rocker na-ejikọ isi ihe dị mkpa na mkpanaka na-ama jijiji, nke na-azọpụta ụfọdụ ibu.
Nke a bụ Trance X Advanced pro 29 0. Aha ogologo, ọ bụ 'Obodo ejiji dị elu na-abịa na nkwanye ndụ dị ndụ na Fox. Ọ bụ kọmputa na-achịkwa nkwusioru na-akpaghị aka na-agbakwụnye mkpakọ damping na obere gbapụrụ ọsọ.
Ugbu a, anyị ga-ekwu maka nke a ma emechaa, ya mere nọrọ na nche. Aha a adịla kemgbe 2005 mana n'ezie nke a bụ ogologo oge, nkwụsi ike, ikekwe ụdị kachasị dị mfe. Ọ bụ eriri carbon ebe niile, gụnyere njikọ dị n'elu, ebe niile mana ogwe aka nke ala bụ aluminom, dị ka Giant si kwuo, onye nwere damper bụ naanị gram 2,100, nke fọrọ nke nta ka ọkara nke ịdị arọ nke Actofive P-Train ugbu a, ugbu a na-eme ihe n'eziokwu, nke a bụ nchara ụlọ triangle na ọ na-mere na mara mma obere nọmba, ma ọ bụ ka a otutu Mkpa ọkụ karịa ụfọdụ nke ndị ọzọ.
Ugbu a, dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, Giant nwere aha ndị na-ada ụda iji kọwaa ụfọdụ n'ime ihe ndị ha mere ebe a, mana isi okwu ya bụ, nnukwu tubes pụtara obere ibu na obere mgbanwe. Ugbu a, ị ga-ahụ na ebe niile, ọkachasị na okpuru ala mgbodo, ebe ị ga-ahụkwa shei milimita 92 nke obosara kwesịrị ekwesị. Ga-ahụkwa ụfọdụ akara ISCG ndị na-eduzi efere ebe ahụ na Giant mere ezigbo ọrụ na nchekwa etiti ahụ, pad dị egwu n'okpuru downtube na n'elu ụlọ ọrụ ahụ.
Enwere ụzọ ntanetị dị n'ime, mana adọkpụtaghị ya. N'ihi ya, achọrọ m ịkọwa na ọtụtụ igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ na okpokoro agba ọhụrụ, ị nwere ike ịdọrọ eriri ahụ ma ọ gafere n'akụkụ nke ọzọ. Ikwesighi iwe iwe, ọbụnadị itufu ngwaọrụ.
Na Giant, ị ga-eme obere azụ iji wepụta ya. Banyere geometry, m dị ụkwụ isii n'ogologo, nke ahụ bụ nnukwu Trance X, na-eru ụkwụ ise. Ugbu a, ọ nwere geometry na-agbanwe agbanwe anyị kwurula banyere ya na mbụ, nke ahụ na-enyekwa ya nkuku isi nke ogo 65.4 na akụkụ oche nke ogo 76.2.
The carbon eriri Trance X-amalite na $ 4,300 na e nwere ndị a ole na ole ịhọrọ site na, na ọ bụrụ na ị chọrọ ndị fanciest nlereanya ọ bụ onye a n'azụ m, ọ na-efu $ 8,500 na nke na-akawanye gị carbon wiil si Giant, Fox's Live Valve nkwusioru na ihe XTR ụgbọala. Nke ahụ ezuru banyere akụkụ na jiometrị, ka anyị kwuo maka nhazi na otu esi ọhụụ Trance X na ụzọ ụkwụ. (upbe music) Ka anyị gabiga na ntọlite.
Anyị nwetara taya njikwa anyị, n'ezie, nke ahụ bụ minion n'ihu, agbakwunye na 21 PSI na dissector na azụ, agbatị na 23 PSI. Kpọmkwem dị ka ndị ọzọ niile nzọ ụkwụ anyịnya igwe ebe a na ubi ule. Ugbu a, dị ka m kwuru na mbụ, igwe kwụ otu ebe a na-abịa na nkwupụta nkwanye ndụ nke Fox.
Mmasị na-akpali mmasị, ọ na-abịa na batrị ebe a na-ahụ anya nke dị ka ezigbo batrị ahụ. Ya mere, ejiri m ihe dị ka nkeji 20 gbanye ya tupu m mata na ọ bụ naanị batrị adịgboroja na ya. Adịghị m mma na teknụzụ a.
Ya mere na batrị gị dị na ya, ọ mara mma dịka nkwusiochi oge mgbe ị họpụtara ọnọdụ valvụ gị dị ndụ; ị ka kwesịrị ịkụnye ya na ikuku ikuku ziri ezi na nkwụghachi gị na obere mkpakọ mkpakọ ntọala na ndụdụ. (ọ joyụ music) Yabụ kedu ihe bụ isi ihe ndị a niile mgbe ị malitere ịrịgogogogo ugwu ugwu? Ọfọn, ọ ga-atụgharị Trance X wee mee ụgbọ mmiri rọketi. Igwe kwụ otu ebe a nwere ọ kachasị ọsọ na nso nso.
Anyị ga-erute oge ịrị elu anyị n'otu ntabi anya, mana nke ahụ bụ isi okwu nke okwu a. Live Valve na-ewere igwe kwụ otu ụzọ 30-paụnd wee gbanwee ya ka ọ bụrụ ihe dịka 24 ma ọ bụ 25-paụnd fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwe kwụ otu ebe. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, mana ihe ọ na-enweghị bụ na a kpọchiri akpọchi, ọ dị ya ka ọ dị nke ọma, akpọchiri ya.
Mkpọchi anaghị ekwe ka nkwusioru ahụ kwaga, nke ahụ abụghị ikpe ebe a. Ma n'ezie valvụ ahụ dị ndụ nwere mmetụta dịtụ iche na nrịgo ahụ karịa na ọdịda mgbe igwe kwụ otu ebe nọ n'ikuku. Sensọ na ndụdụ na azụ azụ nke maara akụkụ nke igwe kwụ otu ebe dị. ma ọ ka na-adịghị na na super ekpochi mmetụta a ọduọ igwe kwụ otu ebe ga-, nkwusioru anaghị akpali.
Ọ bụghị otú ahụ ka ọ dị. Igwe na-aga n'ihu nwere ike ịkwaga ma ọ bụghị igwe kwụ otu ebe, dị ka DW-Link nke ị gaghị ekpochi ya ma ọlị, mana na njedebe nke ụbọchị ọ na-eme ihe dị oke ọsọ na egwuregwu. Ya mere, anyị maara na Giant dị ka ọkụ ọkụ, mana ka anyị kwuo maka njikwa.
Ugbu a, nke ahụ, Trance X bụ nke ọzọ dabere na mmetụta ụzọ ụkwụ ụkwụ ochie, karịa na Ibis na ọkachamara, na ihe dịka P-Train ma ọ bụ Salsa na njem nkwụsịtụ ogologo. N'ime mpaghara ndị a dị warara, Giant nwere ike ibugharị ma ọ bụ site n'ụdị ọgba aghara ọ bụla ma ọ bụ nke nkume. You ga - ahọrọ ahịrị gị ka ị na - aga ije, ebe ị na - asị, 'Ọ dị mma, aga m' na njem ụzọ ụkwụ njem ka ukwuu, na-aga ije ma hụ ebe m na-aga.
Amaara m ihe ị na-ekwu Levy, m na-eji nnukwu ịnyịnya ígwè m na-aga n'elu ugwu ma anaghị etinye ihe niile P-train aka, ha na-abịa n'elu ugwu na-enweghị m na-atụgharị, ọbụlagodi ebe aghụghọ , ma ọ dị ya ka ọ dị obere ọrụ na igwe kwụ otu ebe dị ka Trance X karịa nke a mgbaghara ndị a na-agbaghara. Enwetara m Trance X maka oge mbụ, agara m ya ụbọchị anọ ma ọ bụ ise naanị ma ọ bụghị megide igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ n'usoro. Na n'ọtụtụ ebe, nkwusioru ahụ nwere mmetụta dị mma, ikekwe ntakịrị ịgbaghara ebe a na ebe ahụ, mana ọ kachasị mma, mana ọ bụ akụkọ dị iche mgbe anyị malitere ịnyaghachi azụ.
Mgbe ala bụ n'ezie ike ike na mkpumkpu, ma ọ bụ traction bụ ihe na-enyo enyo na ntọala ndị a, mgbe m gbara igwe kwụ otu ebe na anyịnya igwe azụ laghachi azụ e nwere a mara ezigbo anya dị iche na nkwusioru arụmọrụ n'etiti Live valvụ na omenala Fox nkwusioru. Ugbu a, chee maka igwe kwụ otu ebe ndị a nwere nnukwu piggyback shock absorbers, ma ọ bụ njedebe dị elu na damper, na ihe ọ dị ka ọ dị, igwe kwụ otu ebe bụ ihe karịrị ntakịrị karịa na enwere m obere traction. N'akụkụ ụfọdụ ị nwere ike ịhụ ya na isiokwu ebe azụ nke igwe kwụ otu ebe gbapụrụ mgbe m achọghị ya, ọbụnadị ihu igwe ahụ.
N'ozuzu ya, ọ dị ntakịrị ka ọ na-agbanwe agbanwe ma na-esikwa ike ntakịrị na traction dị ntakịrị. Ugbu a, akụkụ nke ọdịiche ahụ bụ arụmọrụ nkwusioru, mgbe ị na-apụ apụ nwere ike ịbụ n'ihi ụdị ndụdụ. Ọ bụrụ na ịnweta nkwanye valvụ dị ndụ, valve ndụ naanị dabara na FIT4 fork damper.
N'ikwu eziokwu, ọ bụrụ na ị nweta Trance Xon na obere ala ịma aka ma ọ gaghị abụ ụzọ dị ọcha ọ ga-ejupụta na mgbọrọgwụ na nkume Giant nwere ike ịbụ ọtụtụ ihe ọchị. Nke a bụ igwe kwụ otu ebe, nke na-akwụghachi onye na-agba ịnyịnya nke na-enwe mmasị ịmaba na mmiri na igwu egwu n'okporo ụzọ ahụ. Ebe Salsa na P-Train nọ ebe ahụ maka naanị ịnwale ịga ọsọ ọsọ dị ka o kwere mee, Giant, nke ọma, ọ dị ka Ibis na Ọkachamara ahụ.
Ọ na-akwụghachi onye na-echekwu banyere akara ahịrị ha mma ma na-emekọrịta ihe n'okporo ụzọ ahụ. (upbeat music) Ka anyị kwuo maka oge. Anyị ịrịgo bụ a mix nke nwayọọ otu ụzọ ụkwụ ala n'okpuru na-agwakọta n'ime ụfọdụ mara mma aghụghọ, ngwa ngwa stof, jupụtara na mgbọrọgwụ na nkume n'elu.
Giant nwere oge kachasị ọsọ nke 19 sekọnd karịa Ibis Mojo ma ọ doro ya anya n'ụzọ ahụ. Ihe a dị ka ụgbọ mmiri rọketi zuru oke n'okporo ụzọ. Nke ahụ bụ akụkọ dị iche na ụzọ ịlaghachi.
Giant nwere oge a dị nwayọ nwayọ, sekọnd asaa n'azụ mojo. Na ikwu eziokwu, ọ dị ntakịrị na-amị amị na enweghị m nnukwu okwukwe na traction. (upbe music) Ka anyị gaghachi ọzọ ihe masịrị m banyere ihe mejupụtara ya ma bụrụkwa nnukwu ihe pụtara nye m Shimano.
Ọ bụ Hyper Glide gbakwunyere na ekwuru m ya na mbụ, ọ ga-abụ na m ga-ekwu ọtụtụ ihe n'ọdịnihu dị nso, ị nwere ike ịgbanwe n'okpuru ibu dị ka ọ dịtụbeghị mbụ. Ma nke ahụ bụ kemfe na ụdị nile nke climbs, karịsịa oru ndị. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu maka ya bụ nkwupụta ụyọkọ Fox Live, ma ọ dịkarịa ala ike gwụrụ m ịkwa ákwá banyere ya, nke ọma n'ihi na ihu ya bụ na ọ na-eme ugwu dị ịtụnanya.
Mgbe ịchọrọ ka igwe kwụ otu ebe na-arịgo ugwu na-aga ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye na-agba ịnyịnya nwere ike ịme ugwu niile, ọ bụrụ na ị banye n'ime ụdị ahụ, ọ bụrụ na ahụike bụ ihe gị, ị nọ na valvụ ahụ, ọ dị mma ka anyị kwuo maka ihe ndị na-amasịghị m. M ga-eme n'ezie ka ndụ valvụ nkwusioru laghachi na ahịa. Ọ dị mma, ọ na - eme igwe kwụ otu ebe ka ọ bụrụ onye na - enweghị atụ, ọ na - emekwa ka nkwụsịtụ ahụ siri ike na ọdịda.
M ga-ewere ya ka ọ dị ka ọkpọ azụ nwere 35 PSI ma ọ bụghị 20s dị ala. Iji mara mma, ụzọ ụkwụ anyị dị mgbagwoju anya. Ha jupụtara na mgbọrọgwụ na nkume na ihe na-akawanye njọ ma ọ bụ ka mma mgbe ọ na-ede mmiri.
Nke a na-eme ka igwe kwụ otu ebe nwee mmetụta dị egwu. Ma oburu na ibi ndu, amaghim, odighi ebe ozo n’uwa n’enweghi uzo di egwu. Enwere m mmetụta Live Ventil adịghị adị ka ajụjụ dịka ọ na-eme ebe a na Squamish.
Mgbe m jụrụ Giant maka echiche ya na nke a, ha gwara m ka m cheta na aha Trance na-ekwu na igwe kwụ otu ebe a kwesịrị ịrị ugwu yana mgbada. Maka Giant nke a pụtara 50% ịrịgo, ikike 50%. Ọ ghaghị ịrụ ọrụ abụọ ahụ nhata.
Ọ bụrụ na ndị na-agba ịnyịnya ahụ na-elezi anya iji nweta ikike dị ala, anyị na-eche banyere Regen 29 dị nso 60/40 na-agbadata enduro. (egwu na-ada ụda) Oge maka uru na ọghọm na nke mbụ ebe a ma ọ bụrụ na ị na-achọ igwe kwụ otu ebe nke nwere ike ikpuchi ọtụtụ ala nke na-enweghị okpukpu abụọ ga-ebu ibu na mbara ala. Ọfọn, ịnyịnya ígwè Trance X nwere ike ịbụ ihe ziri ezi maka gị.
Ihe ọzọ banyere nkwanye valvụ a dị ndụ na-adị oke oke ma rụọ ọrụ nke ọma. Ma mgbe ị bara uru na ntanetị, ọ na-esiri gị ike inwe obi ụtọ banyere ụfọdụ ihe a. (Joy music) Ka anyị kwuo maka ọghọm, m ga-ekwupụta nkwakọ ngwaahịa nkwanye valvụ ndụ.
Ugbu a, ọ bụghị naanị ndị Refeyim. Fox nkwusioru ndụ na-ejide eriri iji rụọ ọrụ, ihe mmetụta azụ na ihu, ihe niile ejikọtara na microprocessor, mgbe ahụ ị nwere batrị ahụ n'ebe ahụ. Ihe niile bụ naanị, nke ọma, ejikọtaghị ya nke ọma.
N'iburu nke ahụ n'uche, enweghị njikọta ebe nchekwa ebe a na Trance X.Whi Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na ya ma nwee oghere ndị na-awagharị na ọkpọkọ ala gị, n'echiche m, Anthony Massari nwere ike dabara na tubes gị, Giant, Ọfọn ha enweghị ikike Ikike iyi ihe.
Ma ọ bụghị naanị nke ahụ, ntụgharị ntanetị dị n'ime abụghị ọkpọkọ na ọkpọkọ. Ihe niile dị n'ime, mana ọ na-adaba n'ime. (upbe music) Ka anyị chee ya ihu, n’adịghị ka ụfọdụ anyịnya igwe kwụ otu ebe, ọhụụ Trance X anaghị eme ka ọ bụ igwe kwụ otu ebe.
Mkpebi Giant iji iji elektrọnik na-achịkwa nkwusioru maka ịbawanye ike na-agba ume na-agwa gị ihe igwe kwụ otu ebe bụ. Ma ọ dịghị nke na-aga-eme ka ọ a jụụ igwe kwụ otu ebe anyị na ubi ule otu nke nzọ ụkwụ rigs Trance X - ikpuchi a otutu ala, n'ezie. Ihe mgbochi valvụ ya dị ndụ pụtara na ọ dị oke ọsọ na ịrụ ọrụ nke ọma n'ụdị ala a.
Mgbe anaghị agbaghara mgbaghara siri ike, dị ka igwe kwụ otu ebe dị ka Ọpụrụiche ma ọ bụ Ibis, ma ọ bụ ọkachasị ụgbọ oloko Salsa na P, bụ ihe dị mma maka onye gbasiri ike karịa ma na-achọ ikpuchi ọtụtụ kilomita. Nke ahụ bụ ya maka ndị Giants 'ọhụụ Trance X. Mee ka anyị mata ihe ị chere banyere ya na nkọwa ma denye aha ka ị ghara ịlafu nyocha akwụkwọ nyocha ubi na mkparịta ụka okirikiri ebe m nwere mkparịta ụka na Kazimer. (egwu na-ada ụda)
Kedu igwe ọgba tum tum na-eme na USA?
Nnukwubụ onye na-eme igwe igwe kachasị ukwuu na ụwa site na ntinye ego. companylọ ọrụ ahụ na-ereanyịnya igwen'okpuru aha ya ma mee ha maka isi ụdị dị kaMee njem, Scott na Colnago.Ọgọst 30 2013
Na mbu, e-igwe kwụ otu ebe yiri ihe amachaghị n'okporo ámá obodo ahụ - ha gara ọsọ ọsọ karịa igwe kwụ otu ebe, ebe onye na-agba ya na-agba ụkwụ. E nwere ọtụtụ ụdị, ụdị, atụmatụ na ọkwa dị iche iche nke nkwado maka igwe ọkụ eletrik. Site na inye aka n'ugwu di elu rue mgbe ozo.
Usọrọ e-bike, ebe a bụ 5 kasị ọhụrụ American e-bike ụlọ ọrụ ugbu a. Ka amara gị ọkwa mgbe edere ederede ọhụụ na akara ngosi mgbịrịgba dị n'okpuru, n'akụkụ aka bọtịnụ ịdenye aha. Daalụ maka ikiri, Mind's Eye Design! Onye nwe Juiced Bikes na onye guzobere Tora Harris nwere akara mmụta abụọ na injinia na mbara igwe site na Mahadum Princeton.
Ọ bụkwa onye na-eme egwuregwu kachasị elu nke na-agbaji ọtụtụ ihe ndekọ dị elu, bụ onye mmeri America ise na-anọchite anya obodo ya na 2004 Olympics. Ọrụ na NASA abụghị echiche ya banyere ọkpụkpọ ya. Ya mere, o jikọtara ya akwụkwọ smarts na ịhụnanya ya nke ọzọ ikeegwuregwu na-abịa na ụfọdụ n'ezie ịtụnanya ụzọ iji nweta gburugburu na ụkwụ abụọ Kwere, ọ malitere emebe na-eme ya e-anyịnya igwe.
Juiced Bikes ugbu a na-enye ọtụtụ ụdị na ụdị maka ọtụtụ ojiji. Ejula bụ e-igwe kwụ otu ebe mepere emepe nwere nnukwu batrị 52-volt nwere ike ịga ọsọ ọsọ ruo 30 mph karịa ọtụtụ kilomita 70. Ngwaọrụ ahụ n'onwe ya dị oke mma ma na-eji wiil ndị nwere ihu ọma arụ ọrụ, kama a na-eji rim ndị nwere akụkụ isii na-akwado nke na-esite na etiti ahụ.
The Scrambler bụ onye kacha ere ahịa ma na-elekwasị anya na ahịa igwe kwụ otu ebe. A sọrọ batrị usoro gbatịrị nso ruo 160 kilomita na-enye ntakịrị ihe iwe iji obibi ugwu ugwu agwa nke unyi ụzọ. Ọ nwekwara hydraulic diski brek na mgbapu-ịgba akaebe, taya gnarled.
CrossCurrent bụ igwe eletriki e-bike kachasị elu nke Forbes Magazine kpọrọ 'ezigbo mgbanwe ụgbọ ala'. O zuru oke maka ezumike obodo ma nwee ike kwalite ya na RipCurrent. Ọ bụ e-igwe kwụ otu ebe, nke nwere abụba maka onye ọ bụla chọrọ ịnyagharị tricky teren nwere nkasi obi zuru oke.
Kemgbe ihe karịrị afọ iri, Optibike dị na Colorado abụwo otu n'ime ndị nrụpụta na ndị nrụpụta igwe elektrọnik na United States - nke ana-akpọkarị Ferrari nke igwe eletrik. Onye guzobere ụlọ ọrụ ahụ, Jim Turner, bụ onye mmeri MotoX nke mba abụọ. Ya mere, ọ maara ihe ma ọ bụ abụọ banyere ihe ọ ga-ewe iji sọọ mpi na ọkwa kachasị elu na wiil abụọ na injin.
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Standford University nke na-achịkwa Advanced Vehicle Controls Division nke Ford Motorcycle, enweghị nkụda mmụọ ma nwee nkụda mmụọ na nwayọ nwayọ na ụlọ ọrụ ụwa. Mgbe afọ 9 gachara, ọ malitere Optibike na 2007. Usoro e-igwe gị malitere site na usoro Urban.
Modelkpụrụ bụ isi dị ọnụ ala ma na-enye oke arụmọrụ arụmọrụ. Site na okpokoro agba na moto 500 watt, a ga-ekpuchi anya nke ihe dị ka kilomita 40 na 40 km / h na-atụrụ ndụ. Enwere nhọrọ ịba ụba brekị, kwalite nkwusioru ma gbanwee azụ azụ maka ndị ịgba ịnyịnya chọrọ.
Pro Series bụ Optibike si n'etiti nhọrọ na a standalone set na dropper-style etiti na-ibu na a kacha nta. Batrị buru ibu na-ebuli elu na ụgwọ zuru ezu na 100 kilomita, na nkwụsịtụ arụmọrụ dị elu na-abịa dị ka ọkọlọtọ. Sistemụ draịva na-adịgide adịgide karị maka usoro draịva carbon belt.
Maka onye ọ bụla chọrọ ihe kacha mma, e nwere usoro Elite. Igwe eletrik dị ike karị na 1650 watts nke ike na 190 Nm nke torque ma rie ugwu na ugwu dị elu maka nri ụtụtụ. E meela ka ọsọ ọsọ dị elu ruo 60 km / h, yabụ usoro Elite bụ iwu kwadoro.
BikeFriday bụ ụlọ ọrụ mara mma pụrụ iche nke kwenyere na igwe kwụ otu ebe ga-adabara onye na-agba ya - ọ bụghị nke ọzọ. A maara ha maka ịwagharị anyịnya igwe dabere na mkpa ndị ahịa ma ọ bụrụ na otu n'ime ụdị ụdị onyinye 71 dị iche iche anaghị arụ ọrụ maka gị, ha na-eme otu. Amụnna Alan na Hanz Scholz meere onwe ha aha site na isonye na agba ịnyịnya ígwè gafere mba ahụ na 1980s.
Echiche ha n’èzí igbe ahụ na ihe ọhụrụ ha nyeere ha aka ịga nke ọma n’okwukwe ahụ tupu ha agbanye echiche ha na nkà igwe igwe na mpaghara azụmaahịa - ma hibe BikeFriday. Companylọ ọrụ ahụ na-enye ọtụtụ nhọrọ nkwado eletrik nke nwere ike ịbanye na nke ọ bụla n'ime ụdị 71 dị iche iche. Usoro nke ọ bụla nwere batrị 36 V / 15 A hour nwere ikike dị iche iche na moto nke ahaziri maka ọsọ ọsọ nke 32 km / h.
N'adịghị ka igwe elektrọnik ndị ọzọ, BikeFriday na-enye naanị enyemaka pedal ma ghara ịga n'ihu ọ gwụla ma ọ dịkarịa ala otu onye na-agba ịnyịnya na-agba ọsọ. Injin ahụ n’onwe ya dị ezigbo nwayọ ma dịkwa jụụ, ma ewezuga obere ọsụsọ n’oge ọ na-agba ịnyịnya, emebere ya ka onye ọkwọ ụgbọ ahụ ghara ịma na ha nọ ebe ahụ. Ihe mere ha jiri bụrụ ndị ama ama bụ na enwere ike igbasasị ha ma kekọta ha ka ha daba na akpati.
Ọ na-eme igwe kwụ otu ebe zuru oke maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè bụ ndị ga-agba ụgbọ elu iji mezue nkebi nke ọ bụla nke ogologo njem site na ime obodo. Ihe ọzọ dị jụụ nke BikeFriday nwere gafee usoro ngwaahịa ya niile na-enye otu ụdị ejiji dị ka nhọrọ tandem. Zuru oke maka ndị nne na nna na ụmụ ha, ndị di na nwunye ma ọ bụ ụmụnne nwoke dịka Alan na Hanz n'onwe ha iji nwee obi ụtọ ịgba ịnyịnya ígwè maka mmadụ abụọ.
Emeghị aha ụlọ ọrụ Electric Bike nke akpọrọ ahaghị na California wee wulite whee ha abụọ na saịtị ahụ na ezigbo ochie Newport Beach. Ebumnuche ha bụ iji ihe eji eme ihe dị elu na etu esi arụpụta igwe eletriki kachasị mma n'ụwa. Onye guzobere Sean Lupton-Smith kpebiri ịhapụ ọrụ ịga nke ọma dị ka onye na-eme ụlọ oriri na ọuraụ afterụ mgbe ọ hụchara ọmụmụ nke e-igwe kwụ otu ebe na mkpa ha dị na njem na njem ọrụ.
Na mberede, ugwu, ugwu, afọ, ahụike, ma ọ bụ ahụ ike adịghịzi abụ ihe mgbochi na-egbochi ndị mmadụ ịnya ịnyịnya ígwè dị ka ha na-emebu. Naanị ihe ọ chọrọ bụ akụkụ nke mgbanwe ahụ. Bilọ ọrụ Electric Bike na-enwetazi 99% nke ndị bi na United States nwere ike ịnya ịnyịnya ígwè.
Ha na-ejikọta oriri dị mma na igwe kwụ otu ebe site na okomoko na ịke. Site na imepụta ụdị ọmarịcha ụdị dịgasị iche iche nke igwe kwụ otu ebe yana ihe agakọ na nke jikọtara, ọ na -emepụta ahụmịhe ọhụụ maka onye ọ bụla na-agba. Ọ bụ obere ihe.
america akwụkwọ ọkwa
Otu ihe mmetụta okpomọkụ dị na batrị ọ bụla na-eme ka o doo anya na ọ kwụsịrị ozugbo ma ọ bụrụ na ngwaọrụ ahụ dị ọkụ. 'A na-ewepụ ihe egwu ọkụ mgbe ụfọdụ metụtara batrị lithium kpamkpam. Nke ọ bụla n'ime ụdị 7 dị iche iche nwere ike itinye aka na nhọrọ enyemaka eletrik nke nwere ike ime ka onye na-agba ya gaa kilomita 140 tupu batrị ahụ achọrọ ebubo na nnukwu kilomita 45 / h. Ndepụta anyị na-egosi elektrik e-igwe mara mma nke ọma nke ejima ha -wheel design Rungu bu ulo oru ndi California ozo choputara nsogbu California na nsogbu California.
Nya n’elu aja dị nro bụ ihe siri ike, na e-anyịnya igwe ike gwụrụ nwere ike ịdọba ahịrị kwụ ọtọ, mana ozigbo ịrapara n’ịgbanye aka ekpe ma ọ bụ aka nri. Mgbe ọ bụla Rungu Dualie nwere ụkwụ ihu ihu ihu abụọ na-eme ntụgharị, wiil ahụ na-egwu ala n'ime ntụgharị ntụgharị kama ịpụ apụ - na-egbochi igwe kwụ otu ebe na onye na-agba ya site na ihu jupụtara na ájá. Ma ọ bụghị naanị ájá.
Dualie dị mma maka apịtị, snow, gravel, unyi ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa ọ bụla na-apụ apụ. Teknụzụ nzipu ike na-agbanwe volta site na batrị na igwe eletriki dị elu ma na-enye ike zuru oke iji merie nguzogide nke ala ahụ na-enweghị atụgharị taya. Ọ bụ obe n'etiti igwe kwụ otu ebe na ATV, ebe ngwaọrụ ahụ n'onwe ya dị arọ, 120 lbs., Taya na-adịgide adịgide ma na-agba ume, ma nwee eriri ụkwụ na-eche na ọ dị ka ụlọ n'ụlọ siri ike dịka ọ na-eme nke na-amị amị ma ọ bụ nke dị nro.
Ihe nzuzo iji kwụsie ike bụ na ụkwụ ihu nke ụkwụ dị 9 sentimita asatọ. Onye ọ bụla taya nwere ike ịtụgharị na ọsọ dị iche mgbe ị na-agbagharị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa - dịka ọdịiche dị n'azụ ụgbọ ala na-emeghe. Imirikiti e-igwe kwụ otu ebe nwere mkpokọta nkesa nke 90/10 nke na-amasị taya azụ, mana atụmatụ pụrụ iche nke Dualie na-eweta nke ahụ na nkewa 75/25.
Nke ahụ pụtara na ị ga-ebuwanye ibu karịa taya na ihu ala ma ka mma ịkpọtụrụ ala. Sistemụ dị ka Ackerman sterim jiometrị na-ekwe ka ihu taya nke ọ bụla soro ụzọ nke ya. Tụkwasị na nke ahụ, nkwụsịtụ nnwere onwe nke freeride na ogologo ọdụdụ na-atụnye ụtụ n'inwekwu obi ike na nkasi obi na-akwọ ụgbọala, nke ị ga-enweta abụọ ma e jiri ya tụnyere e-igwe kwụ ọtọ.
Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, ịnwere ike inyere anyị aka site na ịpị bọtịnụ Likedị, ịdenye aha, na ịdebe ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu.
Trek igwe kwụ otu ebe bụ ezigbo akara?
Recap: Kasị mmaBikes emere na USA
DetroitBikesA-Type - fechaa CityIgwe kwụ otu ebe.
ProdecoTech Genesis R EletrikiIgwe kwụ otu ebe- Ọkụ eletrikIgwe kwụ otu ebe.
Co-Motion Cycles Camino - Ebumnuche NiileIgwe kwụ otu ebe.
Igwe eji agba agba Litespeed Pinhoti Boost - Uche NiileIgwe kwụ otu ebe.
Ime ụlọEjiURSA Isi Titanium 1.0 - Abụba TayaIgwe kwụ otu ebe.
Aluminom bụ otu n'ime ihe ndị a na-ahụkarị iji wuo igwe, ebe ọnụ ala dị ọnụ ala na-eme ka m zuo ihe kachasị ọnụ na-ahụkarị eriri carbon nke ala dị n'etiti na-ewere site na aluminom, nke m chere na Masek dị jụụ maka ọtụtụ mmadụ ma na-enwetakwa aha ọjọọ maka ya ọ bụ ihe na-adịchaghị mma karịa nchara ọ bụghị dị ka ọkụ ọkụ carbon ọ bụ ihe na-adịgide adịgide karịa titanium mana ọ dị ezigbo mma ka anyị mee ka o doo anya na ị naghị ewukwasị ịnyịnya ígwè na aluminium ị na-eme ha site na alloys alloys na ihe alloys ndị a na-adabere nke ukwuu ọtụtụ na-eri Ma na usoro nke Njirimara na akpa ma si otú ahụ chọrọ osisi na-emecha nwee, dịka ọmụmaatụ, ịnyịnya ígwè Beaumont, nke na-ewu okpokolo agba site na aluminom, họrọ 6000 aluminom maka otu etiti n'ihi na ihe ndị ahụ dị ntakịrị, ma ọzọ na-ahọrọ 7000 Series, n'ihi na ọ bụ stiffer na Ya mere a obere ike, kamakwa roar buster dị mma maka otu ihe, aluminum alloys dị ọnụ ala karịa carbon fi ma, ma ọ bụ tumadi n'ihi na-eme ka carbon okpokolo agba na-achọ ukwuu, ọtụtụ ihe ndị ọzọ-awa karịa aluminum. Ọ bụchaghị oge iji aka mmadụ rụọ ọrụ, ebe braịlị ọkpọkọ na-achọ nka dị ukwuu, ebe ọ bụ na onye na-arụpụta aluminom ọ nwere ike akpaghị aka, ọbụlagodi na ị na-egbutu mpempe akwụkwọ ahụ, ndị ọzọ ga-eji aka mee ya, nke bụ akụkọ ifo ụbọchị ndị a. ma ọ dịkarịa ala, mmalite ya sitere na nke abụọ nke aluminom okpokolo agba, nke a na-eji ihe oyiyi ndị a mara mma mara mma. Ndị ahịa nke 90s mbụ nke nnukwu tubes buru oke ma sie ike ugbu a bụ nsogbu bụ isi nke ọgbọ nke abụọ okpokolo agba bụ akpa ndị naanị tubes ndị a, nke pụtara na ihe onwunwe ha na-agbanwe mgbe niile n'akụkụ ọ bụla, n'ụzọ dị iche na etiti carbon, nke enwere ike ime ka ọ dịkwuo njọ ma ọ ka na-agbanwe agbanwe na-aga n'ihu na teknụzụ aluminom kachasị na Asia New n'ichepụta ụzọ ndị dị ka hydroforming utes na tube shapes nwere ike ịdị iche iche budata tinyere ha ogologo, na ọ bụrụ na ị ahụ mụbaa ihe ọmụma anyị banyere ma ting, ebe ọkpụrụkpụ tube dịgasị tinyere ogologo, nke pụtara na akụkụ nke gị igwe kwụ otu ebe nwere ike ịbụ na akụkụ nke gị igwe kwụ otu ebe nwere ike ịbụ ihe na-erughị a millimeter oké ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ihe ọ pụtara na aluminom, nke bụ otu n'ime ya kasị mkpa eke Njirimara, bụ na ọ dị nro dị jidesie ike, ma na-enye usoro ikpo okwu a na-aga ụkwụ na ụkwụ.
Nke a bụ ajụjụ siri ike, dị ka anyị hụrụ n'isiokwu gara aga banyere eriri carbon, mgbe a bịara n'ihe banyere ịgbasi ike, injinịa dị mkpa karịa nhọrọ ihe onwunwe, mana dịka anyị hụkwara n'isiokwu a, ha abụọ nwere ihe dị iche iche ọdịda ụzọ nke mere na carbon gbawara wee gbajie aluminom ga-ehulata wee gbagọọ wee gbajie ma mgbaji ọ bụla nke abụọ ahụ nwere ike ịbụ njedebe, mana enwere ike ịkọ okwu na ịdị ike maka ezigbo ihe kpatara ya mgbe ị na-eche ihe ga-esi na mkpokọta elu Ọ bụrụ na ị na-ekiri agbụrụ n'okporo ámá, ị ga-ahụ ọtụtụ eriri carbon gbajiri agbaji, mana ọ dị obere na ị ga-ahụ ihe ọ bụla gbawara na aluminom, nke pụtara na ọ nwere ike ịnweta aha ahụ na ụwa n'ezie, mana isi ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na Ọ bụ ezie na okpokoro carbon fiber ga-adịru mgbe ebighị ebi, aluminom na-enwe oge ndụ Owensthe FatonAriel nwere ike ọgwụgwụ, mana onye dị ka Trek ebe a na-enye akwụkwọ ikike ndụ na aluminom ha, wh ich pụtara na nchegbu ndị ahụ nwere ike bụrụ ihe dị mma kemgbe, Annadoesnn'ihi na okpokoro agba nchara mara nchara enwere otu nghọtahie na aluminom anaghị ebibi, enwere ike n'ihi na ị nwetaghị ebe ndị ahụ na-acha uhie uhie n'okpuru agba ahụ, mana ọ na-emebi, mana kama nchara, ị ga-enweta ntụ ntụ ọcha, ọkachasị ebe mmiri nwetara n'okpuru agba ma weta ya na Bead elu, mana ọzọ n n'agbanyeghị na nke a nwere ike ịbụ ihe gara aga n'ihi na akpọtụrụ m Trek ịjụ maka ya ma ha kwuru na usoro aluminium nke aluminom enweghi nsogbu a ma ha nwere otutu ihe akaebe site na ha abuo na laabu n'okporo uzo nakwa dika azu. Yabụ na ọ dị mma na ndị nwere igwe ochie aluminium chọrọ ile anya ka ha hụ ma ọ nweghị ihe ịrịba ama a na-egosi na ọ na-agba agba blọlụ Ndị nwere igwe kwụ otu ebe nke oge a nwere ike ịnọdụ ala ma zuru ike Aluminom alloys ka ekewara n'etiti igwe kwụ otu ebe maka akụ na ụba, Ma ileghara ya anya bụ ihe eji eme ya. ou na-eme nke a n'ihe ize ndụ gị, dịka igwe kwụ otu ebe nke igwe nwere ike ị ga - akarị karịa igwe kwụ otu ebe na - enweghị ike ịnwe mmetụta nke ịnọrọ onwe ya, ọbụlagodi na ọnụahịa abụọ na igwe dị otu.
N'ihi nke a, nnukwu ụdị dị ka Trek na Canyon ka nwere ike itinye ego na aluminom dị elu, yana obere ụdị dị ka Bowman, nke na-atọ ụtọ ịhụ ka ihe abụọ ahụ si gbakọta n'okporo ụzọ mgbe anyị kwuru na eriri carbon ederede na mbụ Ọ bụrụ na ịchọghị ịhụ ya, ị nwere ike pịa ya n'aka nri ebe ahụ ma ọ bụ lee anya n'azụ Saranfactory, ebe anyị nwere ike ịhụ ọ bụghị naanị igwe igwe kamakwa carbon dina n'elu, pịa ala ebe ahụ maka isiokwu a ma ọ bụghị ijide n'aka na ị debanyere aha na GCN, iji mee ya, pịa ụwa naanị
Kedu Trek anyịnya igwe na-eme na China?
Emebere Madone SSLX naMee njemisi ụlọ ọrụ ụwa na Waterloo, Wisconsin, ebe ụdị ọnụahịa-ọnụahịa dịarụpụtarana Taiwan ma obuChina. Ihe omumuBikesna-ere obere mbipụta Livestrong Madone SLigwenke ahụ na-aga maka ịbami $ 16,000.Emepụtara njemowo 600 kpọt.Eprel 22 2006
Kedu nke ka mma Giant ma ọ bụ Trek?
Kedu nke ka mma GT ma ọ bụ njem?
NaGTnwere ọtụtụmmammiri, mgbeMee njemnwere draịva 2 × 9 nke na-enye ọkwa dịgasị iche iche.
A na-eme igwe igwe Cannondale na USA?
Mkpebi: AreCannondale Bikes Meren'imeEji? Ọ bụghị,Cannondale anyịnya igwedị nwute na agaghịzịmeren'imeEji. Ọtụtụ n'ime haanyịnya igwedị ugbu amerena Taiwan.Ọnwa Ise 6, 2021
Ndi igwe kwụ otu ebe dị mma karịa ibu?
N'ozuzu,Nnukwudị ọnụ ala karịakarịa Trek. N'ihi ebe esi arụpụta ha,Nnukwunwere ike idozi ụgwọ nke yaigwe kwụ otu ebeala.Trek anyịnya igwena-enye njem mmefu ego-enyi na enyi, mana haanyịnya igwe, na nkezi, dị ọnụ karịa ịzụta.
Gịnị mere Trek anyịnya igwe ji dị oke ọnụ?
Imirikiti nso ha na-emere ha site na otu ndị nrụpụta na-emeanyịnya igwemaka ọtụtụ ụdị ndị ọzọ. Ruo mgbe ahịa gafere ọtụtụ puku dollar, haanyịnya igwedịukwudị ka ọnụ ahịa yiri nke ahụanyịnya igwesite na ndị niile na-asọmpi ha. Ka ọnụahịa na-arị elu, enwere ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti ụdị ndị a.
Kedu ndị bụ ụlọ ọrụ na-eme ịnyịnya ígwè Trek?
Trek Bicycle Corporation bụ igwe na-emepụta igwe kwụ otu ebe na onye na-ekesa ya n'okpuru aha aha Trek, Electra Bicycle Company, Gary Fisher, Bontrager, Bikes Diamant, Villiger Bikes na, ruo 2008, LeMond Racing Cycles na Klein.
Ebee ka ha na-eme njem Bkes na Taiwan?
O doro anya na ọ dị mma na ha na-eme ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na Taiwan karịsịa okpokoro agba carbon N'ikpeazụ ọ dịghị mkpa - ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-ewu ụlọ na ịbịaru / CAD Model / design / spec, nke a na-enye site na imewe dept. Trek Factory Tour, ha na-eme nke ukwuu ha niile n'elu OCLV okpokolo agba e.
Ebee ka igwe kwụ otu ebe mbụ si?
Ndị abụọ ahụ malitere ya na Waterloo, Wisconsin, nke bụ ebe ụlọ ọrụ ahụ ka nọ n'isi ya taa. Kemgbe ahụ, Trek agbawaala kpamkpam, na-ere ihe igwe igwe 1.6 nde kwa afọ ugbu a. Ha ewetawo ọtụtụ ụdị n'okpuru ụlọ ha kemgbe ọtụtụ afọ.